Hupenyu hwekushandisa hwave chinhu chakakosha kukanganisa kubatsirwa kwejekiseni muforoma. Kana nzira dzinonzwisisika dzikashandiswa kugadzira hupenyu hweforoma kupfuura hunodikanwa dhizaini, ipapo purofiti yekambani ichavandudzwa zvikuru. Hedzino dzimwe nzira dzekuvandudza hupenyu hweforoma. 1. Correct ...
With 20 + makore 'ruzivo mapurasitiki muforoma kugadzira uye epurasitiki chikamu kugadzirwa, YF Mould ane ruzivo ouinjiniya magadzirirwo uye toolmaking chikwata. Isu tinoedza kusangana uye nekupfuura vatengi vedu zvinangwa uye zvinotarisirwa. Panguva yekugadzira chakuvhuvhu, zvinhu zvitatu zvatinofanira kuteerera 1. Iwe haugone ...
Nhasi, timu yedu yakagamuchira neushamwari Jan, CEO wekambani yeBelgian yenyika dzakawanda uye nechikwata chake kusanganisira mainjiniya ekugadzira zvigadzirwa, mamaneja ekutenga uye mainjiniya eprojekti kufekitori yedu. With nyanzvi uye kuomerera zvinodiwa, ivo revi ...
Mould Factory, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Prototype Mould Vagadziri, Tsika Mould, Mould Vagadziri, Plastic Kuisa richigadzirisa,